Ingcabha isele kubahleli ngolukaMbenge | Bayede News
Home/ Ezemidlalo/Ingcabha isele kubahleli ngolukaMbenge
uThulani Mbenge. Isithombe: nguNicholas Lourens
UTHULANI Mbenge uhlulwe okokuqala selokhu abangumshayisibhakela esigabeni esikhokhelayo ehlulwa uSebastian Formella ngoMgqibelo ziyisithupha kuNtulikazi 2019 eCU Arena, eGermany. Ngenxa yalokhu kwehlulwa ulahlekelwe yibhande lakhe le-IBO welterweight.
Le mpi ibinzima kakhulu njengoba ibenemizuliswano emihle ziqhuthana amakhizane. UMbenge uyinqobile eminye yayo. Ngokwamaphuzu alempi uMbenge unqobile kodwa uma sekufakwa amaphuzu okuthi uFormella ulwela ekhaya ube esehlulwa kanjalo uMbenge. Ngakho-ke uMbenge ufuna impinda yalo mdlalo inkinga womabili lamaqembu alabashayisibhakela afuna lo mdlalo uze emazweni abo ngenxa yamaphuzu atholwa olwela ezweni lakhe. Ithimba likaMbenge alivumelani nokuba lomdlalo uphinde ubanjelwe eGermany kanti kwasekuqaleni kwaba yiphutha ukuba ubanjelwe khona ngoba ngokujwayelekile umpetha akahambi kodwa ulwela ekhaya ngoba isuke ingekho ingcindezi yokuvikela ibhande lakhe. Akufani nosuke efuna ukulinqoba leli bhande.
Ingcabha manje isingakubo ngokuphindwa kwalo mdlalo neminye imidlalo kuyaphambili njengoba la eNingizimu Africa ingekho kakhulu imali kulomdlalo mawuqhathanisa namanye amazwe ngenxa yokugqoza kwabaxhasi nokuthengwa kwamalungelo okusakaza. Kunzima ukuqagula ukuthi bazokwenzenjani ngakho konke lokhu ukuze bangaphinde behlelwe into efanayo yokuhlulwa ngamaphuzu anikezwa bhusende umshayisibhakela olwela ekhaya.